Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha Sameeyaha Shaabada Jumlada | Saxnimada QY
Waa maxay farsamaynta Stamping?
Habka shaabadaynta waa hab farsamaynta birta, kaas oo ku salaysan qallooca caagga ah ee birta. Waxay isticmaashaa caaryada iyo qalabka wax lagu shaabadeeyo si ay cadaadis ugu saarto xaashida si ay u keento qallafsanaanta balaastiigga ama kala goynta xaashida si ay u hesho qaab gaar ah, cabbir iyo waxqabad. Qaybo (qayb shaabadaysan).
Habka shaabadaynta ayaa boos muhiim ah ka haysa habka wax soo saarka jidhka ee baabuurta, gaar ahaan qaybaha waaweyn ee daboolaya jidhka baabuurka. Sababtoo ah inta badan qaybaha waaweyn ee daboolan ee jidhka baabuurku waa kuwo qaabaysan, qaab dhismeedkoodu weyn yahay, iyo qaar ka mid ah meelo qaloocsan, iyo shuruudaha tayada korka ayaa sarreeya, habka shaabadaynta ayaa loo isticmaalaa in wax soo saarka qaybahan aan la mid ahayn hababka kale ee processing.
Shaabadeynta waa habka biraha qallafsanaanta qaboojinta. Sidaa darteed, waxaa loo yaqaan shaabad qabow ama shaabadeynta xaashida, ama shaabadeynta gaaban. Walxaha xaashida, dhinta iyo qalabku waa saddexda walxood ee farsamaynta shaambada.
Biraha aduunka, 60 ilaa 70% waa taariko, kuwaas oo intooda badan lagu shaabadeeyey alaab dhammaatay. Jirka baabuurka, chassis-ka, haanta shidaalka, baalasha hiitarka, durbaanka kuleyliyaha, qolofka weelka, matoorada, xaashida birta silikon ee xudunta u ah birta, iwm. dhamaantood waa la shaabadeeyay oo la farsameeyay. Waxa kale oo jira qaybo badan oo shaabad ah oo ka mid ah alaabta sida qalabka, qalabka guriga, baaskiilada, mashiinada xafiisyada, iyo maacuunta nolosha.
Marka la barbar dhigo tuurista iyo been-abuurka, qaybaha shaabadeynta waxay leeyihiin sifooyin khafiif ah, isku mid ah, iftiin iyo xoog. Shaabadaynta waxay soo saari kartaa qaybo leh qallafsanayaal, feeraha, undulations ama flanges kuwaas oo ay adag tahay in lagu soo saaro habab kale si loo hagaajiyo adkaantooda. Sababo la xiriira isticmaalka caaryada saxda ah, saxnaanta qaybaha waxay gaari karaan heerka micron, iyo dib u soo celinta ayaa sarreeya, qeexitaannada waa kuwo joogto ah.
Habaynta shaambada waxay leedahay codsiyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ah. Tusaale ahaan, hawada, duulista, warshadaha militariga, mishiinada, mashiinada beeraha, elektiroonigga, macluumaadka, tareenada, boostada iyo isgaarsiinta, gaadiidka, kiimikooyinka, qalabka caafimaadka, qalabka guryaha iyo warshadaha iftiinka, waxaa jira habab shaabadeynta. Ma aha oo kaliya loo isticmaalo warshadaha oo dhan, laakiin shakhsi kasta ayaa xiriir toos ah la leh alaabta shaabadda. Waxa jira qaybo badan oo waaweyn, dhexe iyo kuwo yaryar oo lagu shaabadeeyo diyaaradaha, tareenada, baabuurta, iyo cagafyada. Jirka baabuurka, fareeshka, cidhifka iyo qaybaha kale dhamaantood waa shaambadeeyeen. Marka loo eego tirakoobyada sahanka ee khuseeya, 80% baaskiillada, mashiinnada dharka, iyo saacadaha ayaa ah qaybo shaabadaysan; 90% TV-yada, cajalad duubayaasha, iyo kamaradaha waa qaybo shaabadaysan; Waxa kale oo jira qolof ka samaysan biraha cuntada, kuleyliyeyaasha la xoojiyay, weelasha dhaldhalaalka iyo alaabta miiska birta ah ee aan-lahayn, kuwaas oo dhammaantood ah qaybo shaabadaysan.
Hore: Codsiga Warshadaha Warshadaha
Xiga: Dhamaystir dusha sare
Geedi socodka Stamping Birta
Adeegga Stamping Birta
Habka Shaabadaynta Xashiishka